Somalia: Dagaal Xoogan oo Saaka Dhex Maray Ciidamada Badda Maamulka Puntland Iyo Budhcad Badeedka Markabka Afduubay - Wargane News
Home Somali News Somalia: Dagaal Xoogan oo Saaka Dhex Maray Ciidamada Badda Maamulka Puntland Iyo...
Wararka naga soo gaaraya Degmada Xaabo ee Gobolka Bari ayaa sheegaya in ay Ciidamada Badda Puntland iyo kooxdii Afduubtay Markabka ARIS-13, uu saaka dagaal ku dhexmaray degmadaas.
Gudoomiyaha Degmada Caluulla oo aan la xiriiray ayaa ii sheegaya in saaka iska hor imaadku ka dhashay koox sixiimad wadata oo u socday kooxda Afduubtay Markabka ay iska hor istaageen Ciidamada Badda Puntland, ka dibna uu halkaasi ay isku weydarsadeen Rasaas.
Way adag tahay in la ogaado khasaraha iska hor imaadkasi ka dhashay.
Ciidamada Badda Puntland ayaa wada Abaabul dagaal oo ay doonayaan in lagu go’odoomiyo kooxdan hayasata Markabka ARIS-13 .
Dhinaca kale Ciidamada Shisheeye ee kusugan Xeebaha Soomaaliya ayaa ku soo dhawaaday Biyaha Degmada Xaabo oo ah halka uu joogo Markabku waxayna xooga saarayaan in ay qeyb ka noqdaan howlgal Milateri oo ay fuliyaan Ciidamada Badda ee Puntland.
Degmada Xaabo ee Gobolka Bari